Ra’iisul-wasaaraha Britain oo ugu yeeray al-Shabaabinay hubka dhigaan
Febraayo 22, 2012
Hanjabaadaha argagixiso ee al-Shabaab ee ka jira Geeska Afrika waa ay ka sii dari karaan “haddii aynaan taxaddar muujin”, Sidaa waxa Arbacadii (22-ka February) yiri David Cameron, Ra’iisul-wasaaraha Ingiriiska. Qodobbo la xiriira
Shirka London oo fursad siinaya Soomaalida
Hogaamiyayaasha adduunka ee ku sugan London oo ku baaqay in wax laga qabto Soomaaliya
Shirka London oo isku raacay in Soomaaliya loo fidiyo taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed
“Halista ammaan waa mid dhab ah; waana mid ballaaran,” Cameron ayaa sidaa u sheegay laanta af-Soomaaliga ee BBC-da. Alshabab “colaadda jihaadiga ah kama waddo Soomaaliya kaliyee ee waxay sidoo kale ka waddaa bannaanka Soomaaliya” ayuu yiri hadalkiisa raaciyay. “Waa ay caddahay in ay jiraan dad dhallinyaro ah oo hubka ku qaatay Soomaaliya. Waxan u baahanahay in aan dadkaas ku niraahno, ha yeelina sidaas, ka waantooba dariiqaas. Waxad ku biiraysaan ururu hadda loo aqoonsaday argagixiso caalami ah,” Cameron ayaa sidaa sheegay habeen ka hor maalinta uu furmi doono shirka London ee arrimaha Soomaaliya.
Wakiillo ka socda in ka badan 40 dal ayaa ka soo qayb-gali doona shirka, kuwaas oo ka wada hadli doona qaababka lagu caawin karo dawladda Soomaaliya in ay nabaddii iyo xasilloonidii ku soo celiso dalka.